Cristiano Ronaldo oo xiiseenaya inuu raaco wadada Lionel Messi – Gool FM
Cristiano Ronaldo oo xiiseenaya inuu raaco wadada Lionel Messi
Dajiye August 29, 2018
(Juventus) 29 Agoosto 2018. Wararka ka imaanaya gudaha dalka Talyaaniga ayaa waxay shaaca ka qaadeen in Cristiano Ronaldo uu ka fiirsanayo inuu raaco wadada laacibka kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Argantina ee Lionel Messi.
Wargeyska “La Gazzetta dello Sport” ee dalka Talyaaniga ayaa wuxuu daboolka ka qaaday in Cristiano Ronaldo uu doonayo inuu sii wato tababarka kooxda Juventus inta lagu jiro kulamada caalamiga ah ee soo aadan si uu ula qabsado Bianconeri.
Wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in go’aanka uusan wali ahayn mid la hubo ee rasmi ah, laakiin Cristiano ayaa wuxuu doonayaa in xulkiisa Portugal uu ka maqnaado labada kulan soo aadan ay la ciyaari doonaan Croatia iyo Italy.
Go’aanka Cristiano Ronaldo ayaa la mid ah kan Lionel Messi kaasoo horey u go’aansaday isna inuu ka maqnaado kulamada soo aadan ee xulka qaranka Argantina.
Waxaa jiray warar badan ee ku aadan in Cristiano Ronaldo uu doonayo in gabi ahaanba uu isaga fariisto ciyaaraha caalamiga ah, kadib markii uu xilkiisa Portugal kala qeyb galay koobka aduunka lasoo dhaafay ee 2018.
Halyayga kooxda Manchester United Ryan Giggs oo si weyn u garab istaagay Jose Mourinho
Macalinka Burnley Sean Mark Dyche oo difaacay Mourinho, kahor kulanka ay kuwada ciyaari doonaan Premier League